All You Need to Know About Poker Chip Cases│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
A case to protect and secure your chips, cards and dealer button is imperative to protect your investment and provide the necessary security for your chips. The chips will remain safe under lock and key during play leaving you to concentrate on your play. You can quickly determine if any chips are missing afteraplaying session when you rack them into the case. Poker chip cases come inawide variety of styles, materials and price ranges. Most chip sellers offer complete sets with an included case. Inexpensive, readily available plastic chips need not be protected so the case may be as simple asashoebox but once you move into midrange and better casino style chips you should definitely consideraquality lockable case. Plastic Case Entry level carrying case for chips that usually is not lockable and providesasimple method of storing and carrying you gaming chips. Plastic cases boast the lowest cost but the shortest life of the specialized chip cases. Lack of security requires constant vigilance of chips during the game. Vinyl Case The vinyl case isastep above the plastic case and provides greater protection for the poker chipset. The case is usually constructed from wood or plastic covered withavinyl material. The case may or may not be lockable. A major concern issue with vinyl cases is durability. The weight ofa500 chipset of 11.5 gram poker chips is close to twenty pounds and places considerable stress on the carrying case and handle. The failure mode for most vinyl cases is separation of the handle from the case due to the weight. Metal Case The metal case is the most common and popular poker chip carrying case. Most metal cases are constructed from structural aluminum inawide range of styles and price ranges. The quality of metal cases varies considerably so it is important to comparison shop and choose wisely. Some metal cases are not all metal and may have plastic panels and parts in their construction. Some are not lockable. Others have sharp corners. Exceptionally lightweight metal sheets will not last long. The ideal medal case is medium weight all metal (aluminum preferred) construction with added reinforcement in the critical stress areas plus keyed locks to keep chips secure. The finest all metal cases are constructed from aircraft quality aluminum with removable flocked chip trays, high security barrel locks, machined from solid stock handle fittings and hinges. This case is the top-of-the-line in metal cases and accordingly the most expensive chip case. Wood Case Another chip case option is the quality wood case with custom brass fittings. Wood cases are available in many styles and price ranges form the low end pine models to the major splurge, carved exotic wood with inlayed precious metals handmade byamaster cabinet maker. Most affordable wood cases are constructed from pine, mahogany, oak and other hard woods, the best feature quality construction and finish, heavy duty handles and hinges, keyed locks and well fitting removable chip trays. As with all the cases, wood cases come inavariety of qualities and prices befitting those qualities. All You Need to Know About Poker Chip Cases
Posted Articles Title : All You Need to Know About Poker Chip Cases
■Link To This Post (HTML code) : All You Need to Know About Poker Chip Cases
■Trackback URL : All You Need to Know About Poker Chip Cases
Michelin တာယာများ – တစ် ဦး ဝါသနာရှင်ကနေ Ramblings
The Perfect Golf Swing လေ့ကျင့်ခန်းအောင်မြင်ခြင်း
Gun Safes – အရွယ်အစားကိစ္စရပ်များ
သင်၏ Kayak အသစ်ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း? တစ် ဦး ကကားတစ်စီးထိန်သိမ်းရယူပါ
ငါးမျှားသွားကြရအောင်, whos အဆိုပါ tacklebox တယ်?
Fly ငါးဖမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ‘ သင့်ရင်ဘတ်တဝိုက်တွင်ဆွဲထားသောအရာများ
ထိပ်ဆုံး5Skydiving အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဒဏ္.ာရီများ
ဗြိတိသျှ Aikido ဘုတ်အဖွဲ့ National Nepotism Seminar 2004
Every so often, an innovation comes along that changes the essence ofasport. Hobie Cat’s pedal system has done exactly that for kayaking. Hobie Cat has revolutionized today’s kayak. The demand for the Hobie Cat kayak is growing rapidly. The company has made dozens of kayak models through the years – some for recreation, some for sporting, and some for fishing, surfing and more. Each of those interests requiresakayak type that has been designed especially for that use. All of Hobie Cat’s classic kayak models have pedals! Yes you heard right, pedals! The kayaks have two flippers that rotate on the bottom. When you pedal, the flippers move, which, ဒါပေါ့, makes you movealot quicker! The feature is not only great for speed but also perfect for when you get tired of rowing. You can pedal instead. Hobie Cat classic kayaks let you work out your legs along with upper body. You getawhole-body workout! You also getaquality steering mechanism built into the boat. The mechanism sits directly at in front of you while you are pedaling. The steering direct the flippers under the boat. Hobie Cat isafamous company that makes some of the best kayaks anywhere! If you want to buyanew kayak or upgrade the one you already have, Hobie Cat is the way you want to go. They have kayaks for every skill level and the best styles available on the market! Take advantage of their high standard of quality and buy one of their revolutionary boats. Hobie Cat kayaks work for everyone! Look at their models and you will make up your mind immediately! It will be love at first sight with Hobie Cat’s impressive designs, styles and great pedal innovation! If you get the chance, give the Hobie Catatest drive. I’m sure you’ll be delighted and soon be joining the ranks of happy Hobie Cat users. Use Paddles And Pedals For Twice The Speed – The Hobie Cat Kayak
ဘောလုံးကြယ်တစ်ပွင့်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, 22 နှစ်ပေါင်းများစွာ, ရှေ့တော်၌ရှိသမျှသောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူ, အသိအမှတ်ပြုကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ယခုတရားရေးပြinvolvedနာများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်. တက်ဝက်အူဖို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတစ်ခု! Santonio Holmes သည် Pittsburg Steelers ၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမူကြမ်းကိုလာမည့်သြဂုတ်လတွင်ရုံးတင်စစ်ဆေးရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည် 15. အကြောင်းပြချက်မှာဇွန်လတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအဖြစ်အပျက်များကိုစွဲချက်တင်ရန်ဖြစ်သည် 19 ငါးလသားအရွယ်ကလေး၏မိခင်နှင့် ပတ်သက်၍. Michael Brandt, ကိုလံဘတ်စည်ပင်သာယာတရားရုံးတရားသူကြီး, သားကောင် Holmes ဆန့်ကျင်သက်သေခံရန်ငြင်းဆန်ရင်တောင်ရက်စွဲသတ်မှတ်ပါ, အခြေအနေရှိနေသော်လည်းထိုအမျိုးသမီးသည်စွပ်စွဲချက်များကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်လိုပါ. ကေတီဟုမ်းပေးခဲ့သည် $3.500 အခမဲ့ဆက်လက်ရှိနေရန်နှောင်ကြိုး. ကစားသမားများအတွက်အဆိုးဆုံးအရာရုံးတင်စစ်ဆေးရဲ့ရက်စွဲဖြစ်နေဆဲလျှင်ဖြစ်သည်, Holmes ထက်နည်း Steelers စွန့်ခွာရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေလိမ့်မည်3သူ၏ပထမ ဦး ဆုံး NFL လေ့ကျင့်ရေးစခန်းသို့ရက်သတ္တပတ်. သို့သော်ဤကိစ္စသည် Holmes နှင့်ဥပဒေတို့ပါ ၀ င်သောတစ်ခုတည်းသောကိစ္စမဟုတ်ပါ. သူသည်အောက်မေ့ရာနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွင်အဖမ်းခံရခြင်းကြောင့်မတရားပြုမူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စွဲချက်တင်မှုအတွက်မိုင်ယာမီကမ်းခြေတွင်လာမည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်အမှုကြားနာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်. ဤသို့သောအပြုအမူမျိုးသည်ကေတီဟုမ်းကိုဖြစ်စေသည်’ လဲခြင်းနှင့် NFL နှင့်အတူအမှန်တကယ်ပြproblemsနာများဖြစ်ဖို့ဂုဏ်သတင်း, သူသည်သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံမှန်ရာသီဂိမ်းမကစားမီကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်. လူအများစုက NFL မူကြမ်းတွင်ကောလိပ်တက်ကြွသူများစွာကိုတက်လာရန်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းသိကြသည်, ဒါဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အပေါ်သူတို့အဘို့ရောက်ရှိရန်အမြင့်ဆုံးအိပ်မက်နိုင်ပါတယ်, နှင့်မေးခွန်းနေဆဲဖြစ်သည် ‘ ဘာကြောင့်အချို့ကစားသမားတွေကဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုအသုံးမပြုကြတာလဲ? ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်ကေတီဟုမ်း
အဖေအားလုံးဂေါက်သီးသမားမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်ခမည်းတော်၏နေ့အဘို့ဆုကြေးဇူးကိုဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလုံးဘုံရှိသည်သောသူတို့အား. ဒေသခံဂေါက်သီးဆိုင်များနှင့်အွန်လိုင်းတွင်တွေ့နိုင်သောဖခင်များနေ့အတွက်ထူးခြား။ ပျော်စရာဂေါက်သီးဆုများစွာရှိသည်. ခမညျးတျောနေ့အဘို့အလူကြိုက်အများဆုံးဂေါက်သီးလက်ဆောင်များအချို့ဖြစ်ကြသည်: ကိုယ်ပိုင်ဂေါက်သီးရိုက် ‘ ဒါအမှန်ပဲ! အဖေကသူ့ဂေါက်သီးဘောလုံးကိုသာမန် tee တစ်ခုပေါ်မချတော့ပါ. ဤအကိုယ်ပိုင်ဂေါက်သီး Tee နှင့်အတူ, သငျသညျသူ့ကိုကံအလိုရှိ၏သူ့ကိုသူ့ကိုသူသိစေနိုင်ပါတယ် #1 တိုင်းရိုက်ချက်နှင့်အတူ! ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းများကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်မှာ 'မင်းကနံပါတ် ၁ ပဲ', 'ကံကောင်းပါစေ', ‘ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (ကလေးအမည်)’ နှင့် '' မင်းကအပေါက်တစ်ခု!’ အမျိုးမျိုးသောကိုယ်ပိုင်ဂေါက်သီးဘောလုံး ‘ က. ဂေါက်သီးပုံများ ‘ ဂေါက်သီးဘောလုံးပေါ်တွင်အဖေနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံရှိသည်. ခ. အဘ၏နေ့ဂေါက်သီးဘောလုံး ‘ မက်ဆေ့ခ်ျကို 'မင်္ဂလာအဘခမည်းတော်၏နေ့နှင့်အတူသာမန်ဂေါက်သီးဘောလုံး’ ညာဘက်အခြမ်းအပေါ်ပုံနှိပ်. ဂ. ကိုယ်ပိုင်သတင်းစကားဂေါက်သီးဘောလုံး ‘ ကလစ်အနုပညာပုံရိပ်အမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးဖခင်များနေ့အတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အထူးသတင်းစကားကိုတင်ပါ. ဘား -B-Que ကင်အသုံးအဆောင်သတ်မှတ်မည် ‘ ဒီဂေါက်သီးဝါသနာအိုးများအတွက်ထူးဆန်းအသံလိမ့်မယ်ပေမယ့်, သငျသညျအကောင့်သို့ယူသောအခါ, သစ်ကို set ကို 'Par-B-Que ကင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများသတ်မှတ်', ဒါကြောင့်အဘယ့်ကြောင့်ဂေါက်သီးကစားတာလဲဆိုတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်. ဂေါက်သီးဆုပ်ကိုင်လက်ကိုင်နှင့်အတူ, တံတွေးဟာဂေါက်ကလပ်နဲ့တူတယ်၊! ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းနှင့်ကင်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုနှစ်သက်သောအဖေများအတွက်အလွန်ကောင်းသောလက်ဆောင်တစ်ခု. ဂေါက်ကလပ်နှင့်ဘောလုံးအမှတ်အသားများ ‘ ဤကိုယ်ပိုင်လက်ဆောင်များသည်သင်အကြိုက်ဆုံးကလပ်သို့မဟုတ်သင်၏ကံကောင်းသောဘောလုံးကိုဖျက်ရန်များစွာခက်ခဲလိမ့်မည်. သင်သည်ထိုသူတို့ကိုဝယ်ပြီးတာနဲ့, လိုအပ်သလိုအခြားကလပ်များသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်. တစ် ဦး ကဂေါက်သီးအဓိကအကြောင်းအရာနှင့်အတူဘာမှ ‘ တီရှပ်များရှိတယ်, ရုပ်ပုံများ, လက်ပတ်နာရီများ, ပြား, သငျသညျခမညျးတျောနေ့အဘို့အဖေဝယ်နိုင်သည်ကိုဂေါက်ကလပ်နှင့်ဂေါက်သီးဆက်စပ်ပစ္စည်း galore! သတိရလိုက်ပါ, သငျသညျခမညျးတျောနေ့အဘို့ဂေါက်သီးလက်ဆောင်တွေကိုဝယ်ယူကြသောအခါ, သင်သည်သင်၏ဆုကြေးဇူးကိုထွင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်လျှင်သင် early'especial ရှာဖွေနေစတင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. ပတ်ပတ်လည်ခမညျးတျောနေ့အဘို့အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးလက်ဆောင်တွေရှာတွေ့မှယနေ့ကြည့်ရှုပါ! ခမညျးတျောနေ့အဘို့အအချို့သောဂရိတ်ဂေါက်သီးလက်ဆောင်များ
အကယ်စင်စစ်မုဆိုးတစ် ဦး သည်သူ့ဘ ၀ တွင်အနည်းဆုံးယုန်တစ်ကောင်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးစဉ်းစားခဲ့ဖူးသည်. ဒါပင်ယနေ့လူကြိုက်များကြောင်းပေးထားသည်, ရာသီစတင်သောအခါတိုင်းလူတိုင်းယုန်အမဲလိုက်အဖျား၌ရှိသည်သောမှာအားလုံးအဆင်မပြေမထင်ထားဘူး. သို့သော်, သငျသညျပြီးသားကအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်နေဆဲကြောင်းအမဲလိုက်လယ်ပြင်၌သွားရန်ရှိမရှိမစဉ်းစားလျှင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤအမဲလိုက်သောအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကသင့်အားမစဉ်းစားတော့ပါ. ယုန်အမဲလိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်အလက်များအတွက်ဖတ်ပါ, အချို့သောအတွေ့အကြုံရှိမုဆိုးမသိစေခြင်းငှါ. ပထမ, ယုန်နှင့်ယုန်အမဲလိုက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်, အားလုံးအသက်အရွယ်နှင့်လူမှုရေးနောက်ခံမုဆိုးဆွဲဆောင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ. ဒီအမဲလိုက်ခြင်းမျိုးသည်အများလက်ခံသောယုံကြည်ချက်ဆီသို့ ဦး တည်နေသည့်အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာလူအနည်းငယ်က၎င်းကိုလေးနက်ပြီးခက်ခဲသောအမဲလိုက်ခြင်းအမျိုးအစားဟုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်, ဥပမာအားဖြင့်ဝက်အဖြစ်. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအနည်းငယ်ကပဲ, ထုနှိုင်းယှဉ်, ယုန်အမဲလိုက်ခြင်းသည်မည်သည့်အကြောင်းနှင့်၎င်းသည်မည်မျှရရှိနိုင်ကြောင်းသိပါ, ပင်လူသားရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ၏အကူအညီဖြင့်. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဤအရာကိုအပြည့်အဝနားလည်သောသူတို့က၎င်းကိုထိုက်တန်သောတန်ဖိုးထားမှုကိုပေးသည်, ပြောင်းလဲနေတဲ့လူတွေရဲ့အစဉ်အလာအတွေးအခေါ်တွေကိုသူတို့ရဲ့အလှူငွေပါစေ. ဖြည့်စွက်ကာ, စဉ်ဆက်မပြတ်အားထုတ်မှုနှင့်အတူယုန်နှင့်ယုန်တဖြည်းဖြည်းဒေသများရှိ mot လူကြိုက်များဂိမ်းအမျိုးအစားများအကြားအညီအမျှလက်ခံရရှိဖြစ်လာသည်. ဤသတ္တဝါများ၏ယုတ္တိအကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်’ ထူးခြားသောလက္ခဏာများ, အရာသူတို့ကိုအမဲအလွန်ရှုပ်ထွေးဖြစ်စဉ်ကိုမှန်ကန်စေသည်. ယုန်များကဆင့်ကဲဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ဥပမာမဟုတ်ကြောင်းအစမှသိသင့်သည်; သူတို့ကိုသားကောင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အာရုံတွေကိုတီထွင်ခဲ့တယ်. သူတို့နှစ်သက်သောနည်းဗျူဟာသည်တိုက်ရိုက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်, သူတို့ရဲ့အံ့ sight ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ကြားနိုင်စွမ်းဟာအကွာအဝေးတစ်ခုမှခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်စေပါတယ်. ဒါ့အပြင်, သူတို့ဟာအံ့ fully ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အနံ့ခံအနံ့ရှိသည်, အရာမသာအသားစားရေဒါအဖြစ်က၎င်း၏ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အသုံးဝင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းအစာရှာခြင်း၌တည်၏. တကယ်တော့, ဤအရာအလုံးစုံအကြီးအအာရုံခံနိုင်စွမ်း, ချုံသို့perfectlyုံဖုံးကွယ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူဒွန်တွဲ, သေးငယ်တဲ့သတ္တဝါအတွက်အကာအကွယ် aura ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, အန္တရာယ်ကိုတစ်ခြေလှမ်းနောက်ကွယ်မှအမြဲစောင့်ရှောက်ရန်ရည်ရွယ်သောဒိုင်းလွှား. ခြေလှမ်းများ၏စကားပြော, ယုန် '' စူပါပါဝါ’ vivaciously နှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမှာ Sprint ၎င်း၏ကျော်ကြားသောစွမ်းရည်သည်, အဖြစ်က၎င်း၏ဒဏ္andာရီနှင့်အတန်ငယ်မမျှော်လင့်ဘဲခံနိုင်ရည်. အဆိုပါအစက်အပြောက် -and မဟာဗျူဟာခေတ်တစ်လျှောက်လုံးနည်းနည်း varmint ကောင်းသောအစေခံခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်တောင်မှအမဲလိုက် beagles တစ်ထုပ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရပင်ဤသည်၎င်း၏အသက်ကိုကယ်ဖို့မလုံလောက်ပါ. Beagles များသည်အထူးလေ့ကျင့်ထားသော hound များဖြစ်ပြီးယုန်ကိုဖမ်းရန်နှင့်သတ်ရန်သူတို့၏အနံ့အပေါ်တွင်သာမှီခိုသည်, နှင့်သင်၏အမဲလိုက်အစည်းအဝေးများအပေါ်သင်နှင့်အတူတစ် pack ကိုဆောင်ခဲ့ဆက်ဆက်ခြားနားပါလိမ့်မယ်. သို့သော်, beagles မရှိ pack ကို, နေပါစေဘယ်လောက်ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိ, သငျသညျသောကွောငျ့တပြင်လုံးကိုအမဲလိုက်ခြင်းပြုလိမ့်မည်, s မုဆိုး, နောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်. သူတို့ကယုန်ကိုခြေရာခံလိုက်ရင်လမ်းပြပေးလိမ့်မယ်, အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရန်မည်သည့်ယုန်ကိုသူတို့အနေဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသည်ကိုခြုံငုံ။ ချုံဖုတ်မှထွက်လာရန်အမိန့်ပေးသည်. သင်မြင်သည့်အတိုင်း, ယုန်အမဲလိုက်ခြင်းသည်တနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းအားကစားတစ်ခုထက်ပိုသည်, မဟာဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်, အခွင့်အလမ်းတိုင်းကိုရေတွက်ပါ. အမဲလိုက်ခြင်းကျွမ်းကျင်သူများကမည်သည့်အမဲလိုက်ခြင်းသည်နောက်လာမည့်နှင့်တူမည်မဟုတ်ပါ, ဆိုလိုသည်မှာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်စာလုံး 'R' အောက်ရှိယုန်အမဲလိုက်အဘိဓာန်တွင်မရှိကြောင်းဆိုလိုသည်။. ဒါမှမဟုတ်အားလုံးမှာ. ယုန်အမဲလိုက်ရွေးပြီးသင်၏ဘဝကိုဖျော်ဖြေမှုများယူဆောင်လာပါ
ယူအက်စ်အေ, နှစ်မိနစ်တိုင်း အမျိုးသမီးတစ် ဦး မုဒိမ်းကျင့်နေသည်. က 1993 စစ်တမ်းကဖော်ပြသည် 50% ကနေဒါအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်. သြစတြေးလျ၌, 19% အသက်အရွယ်အမျိုးသမီးများ 18 ရန် 24 ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုလုပ်ရပ်ကြုံတွေ့ခဲ့သည်. ကိန်းဂဏန်းများအရအမေရိကရှိအမျိုးသမီးလေး ဦး လျှင်တစ် ဦး သည်သူမ၏တစ်သက်တာတွင်လိင်စော်ကားခံရလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်. ဤရွေ့ကား SHocking စာရင်းဇယားဖြစ်ကြသည်! ထက်ပိုသည် 30 နှစ်ပေါင်းငါအထူးပြုကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးသင်တန်းများနှင့်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲပါပြီ. အဲဒီအချိန်မှာထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်၊. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့် အမြဲတမ်း အသိအမြင်နှင့်အတူစတင်. မိန်းမအများစုသည်လိင်သဘာဝကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းထက်အခြားအရာများထက် ပို၍ ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အမြန်အကြံပေးချက်အများစုသည်ထိုအရာကိုရည်ရွယ်သည်. သင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်, သင်၏လုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်စေမည့်သင်ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သောရိုးရှင်းသောအရာ ၁၀ ခု၏စာရင်းဖြစ်သည်: 1 – ထင်ရှားသောနေရာများတွင်အဝတ်အစားမဝတ်ပါနှင့်. ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာရရှိမည်ဖြစ်သည်, မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူသူတို့အားလူများ၏အာရုံကိုအပါအဝင်. သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ရင်းနှီးမှုကိုခံစားနိုင်သည့်အချိန်ကာလများကိုသေချာစွာခွဲခြားထားပါ.2– သင်၏ဗီဇအတိုင်းယုံကြည်ပါ. အမျိုးသမီးများသည်အလိုလိုသိသည်. အခြေအနေတစ်ခုကအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့မင်းထင်ရင်အဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်. ဒီအုပ်ထိန်းသူကောင်းကင်တမန်လေးကိုလျစ်လျူရှုမယ့်အစားယုံကြည်စိတ်ချသင့်ပါတယ်.3– မုဒိမ်းမှုနှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများသည်အမြဲတမ်းတိုးများလာနေသည်. အဆိုးဝါးဆုံးရလဒ်မှာသင်၏လက်သည်းကို အသုံးပြု၍ သင်၏တိုက်ခိုက်သူပါးကိုပုတ်ပါ. ၎င်းသည်သူ့ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်အမှတ်အသားပြုပြီးသင်၏လက်သည်းအောက်၌ DNA ရှိလိမ့်မည်.4– သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုယဉ်ကျေးစွာဖြင့်မောင်းနှင်ပါ. ရိုင်းစိုင်းသောလက်သင်္ကေတများကိုဘယ်သူမှတန်ဖိုးမထားပါ. သတိရပါ – နောက်ဆုံးတော့မင်းကိုရပ်ရမယ်, အဲဒါကိုဆီဖြည့်ဖို့ဆိုရင်တောင်မှ. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများသည်သင့်ကိုမိုင်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လိုက်နိုင်သည် “သင့်ကိုသင်ခန်းစာပေးရန်” – ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့လိမ်လည်လှည့်စားတဲ့သူတွေကိုပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်.5– အရက်အလွန်အကျွံပမာဏကိုသောက်သုံးခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးကိုစိတ်ပြောင်းခြင်းနှင့်မည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုမသောက်ဘဲထားခြင်းဖြင့်၎င်းအားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောနေရာတွင်ထားခြင်းသည်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်နည်းလမ်းဖြစ်သည်. သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ် ဦး ပင်အခွင့်အလမ်းပေးပါ.6– ထစ် - ဘယ်တော့မှကောက်ယူဘယ်တော့မှနှင့်လုံးဝလုံးဝကိုယ့်ကိုယ်ကိုထစ် - တိုးမြှင့်ဘယ်တော့မှမ.7– အကယ်၍ သင်တစ် ဦး တည်းနေထိုင်မည်ဆိုလျှင်သင်၏ပထမဆုံးစာလုံးဖြင့်သင်၏စာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်သေချာပါစေ. Miss ကဲ့သို့သောနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများဖြင့်သင့်အားမေးလ်ပို့ရန်ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုပါနှင့်, ဒေါ်, မစ္စသို့မဟုတ်သင်၏ခရစ်ယာန်သို့မဟုတ်ပေးထားသောအမည်နှင့်အတူ. သင့်ထံမရောက်မီထိုစာများနှင့်ကဒ်ပြားများကိုမျက်စိများစွာဖြတ်သန်းနေရသည်. သူတို့ကိုပြောင်းပါ. သင်၏လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့အားအတိအကျဖော်ပြရန်မထားပါနှင့်. ဘာကြောင့်မင်းကိုမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာထပ်မပေးစေချင်တာလဲ? 8 – တစ် ဦး တည်းသောညတွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေသီးခြားနေသည့်နေရာများတွင်ဘယ်တော့မှမသွားပါနှင့်. သားကောင်များသည်ဤနေရာများကိုနှစ်သက်ကြသည်. သူတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ.9– များစွာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကျူးလွန်ခံရသူများသိသောလူများကကျူးလွန်သည် – ဒါမှမဟုတ်, အနည်းဆုံး, သူတို့သိတယ်ထင်တယ်! အားလုံးဖော်ရွေပြီးယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံပါ။ သို့သော်အရိပ်အမြွက်ပြရန်နိုးနိုးကြားကြားရှိပါ “ထူးဆန်း” အပြုအမူ. ပရောပရည်မလုပ်ပါနဲ့. မလိုလားအပ်သောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်မာပါ, အထူးသဖြင့်အလုပ်ခွင်၌တည်၏. 10 – လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုသည်များသောအားဖြင့်အချို့သောအမြင်အာရုံလက္ခဏာများဖြစ်သည်, သောများသောအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူမတိုင်မီအချို့နှုတ်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်. sequence ကိုအသိအမှတ်ပြုပါ: အကြည့် – ဟောပြောချက် – တိုက်ခိုက်မှု. သင်ဤစောင့်ရှောက်မှုစာရင်းကိုသင်ဂရုစိုက်သည့်အမျိုးသမီးတိုင်းကိုဖြန့်ဝေရန်မင်္ဂလာပါ. တစ်ခုတည်းသောအခြေအနေမှာအရင်းအမြစ်အကွက်သည်နဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးဤဆောင်းပါးသည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှမပြောင်းလဲပါ. ထွက်ရှိဤမျှလောက်များစွာသောသားကောင်တွေကိုရှိပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကူညီကြပါစို့ ကာကွယ်သည် သူတို့ကိုယ်သူတို့! သင်သိသောတစ်စုံတစ်ယောက်အားနောက်သားကောင်ဖြစ်ခွင့်မပြုပါနှင့်. 10 အမျိုးသမီးများအတွက်အစွမ်းထက်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးအချက်များ
LPGA Tour ပေါ်ရှိ Pros မှသင်ယူပါ
အစွမ်းသတ္တိရှိသောအမျိုးသမီးများသည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်လေ့ရှိသည်, ပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်အရည်အချင်းခံစားရသည်. LPGA ခရီးစဉ်တွင်အတွေ့အကြုံရှိသောကစားသမားအချို့ကိုသာကြည့်လိုက်ပါ. ဤအမျိုးသမီးများသည်ကာယရေးအရအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်နှင့်ယုံကြည်မှုရှိရန်မိမိတို့၏အချိန်ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်, သင်တန်းအပေါ်နှင့်ပယ်နှစ် ဦး စလုံး. နန်စီလိုပက်ဇ်, ဂျူလီ Inkster, Annika Sorenstam, နှစ်ပေါင်းများစွာ LPGA တွင်ရှိခဲ့ဖူးသောအခြားအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ကောင်းမွန်သောဂေါက်သီးလွှဲကိုဖန်တီးရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ထက်များစွာပိုသည်ကိုသိကြသည်။. ဂေါက်သီးစွမ်းဆောင်မှု၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူ hectic ခရီးသွားလာရေးအစီအစဉ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားနှင့်လုံလောက်သောစွမ်းရည်သည်ကောင်းမွန်သောပုံစံရှိရမည်။. ဤ LPGA ကစားသမားများသည်သူတို့၏အဆင့်အတန်းနှင့်အရည်အသွေးလေဖြတ်ခြင်း၏တသမတ်တည်းကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းထားသနည်း? ဤအမြိုးသမီးမြား၏အများစုလုပ်သောအရာတစ်ခုမှာ, ဂေါက်သီးသမားအများစုသည်မသန်စွမ်းသူများကိုသူတို့၏အလောင်းများကိုအခြေအနေပေးသောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်. ဂေါက်သီးသမားအများစုသည်အားကစားလေ့ကျင့်မှုမှရှောင်ရှားကြသည်. အချို့သောပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိမ့်မည်နေစဉ်, သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအစွမ်းသတ္တိပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး; အမျိုးသမီးအများစုသည်တိုးတက်မှုများစွာလိုအပ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. လူအတော်များများသည် cardio လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များလုပ်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းကြသည်, သေးကြွက်သားအစွမ်းသတ္တိတိုးတက်အောင်အရည်အသွေးအချိန်ဖြုန်းကြဘူး, သေံနှင့် function ကို. အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်ရန်အမျိုးသမီးများကိုဂေါက်သီးကစားရန်အကြံပြုသည်, နေပါစေသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ကစား၏အဘယ်အရာကိုအဆင့်ကို. အသက် ၇၀ ကျော်အမျိုးသမီးများသည်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိနိုင်သည်ကိုပင်သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်. များစွာသောအမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့သည်အမြောက်အများထွက်ပေါ်လာမည်ဟုစိုးရိမ်ကြသည်’ သူတို့သိပ်အလေးမလိုက်ရင်. မဖြစ်နိုင်ပါဘူး. အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများလုပ်သောဟော်မုန်းများမရှိကြပါ. အမျိုးသမီးကြွက်သားကိုပိုမိုသတ်မှတ်နှင့်အစွမ်းထက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့မဟုတ်ပါဘူး. ပုံမှန်အားကစားလေ့ကျင့်မှုသည်ဂေါက်သီးသမားများအတွက်သင်တန်းနှင့်သင်ကြားရေးတွင်များစွာအကျိုးရှိသည်. ခွန်အားကိုတိုးတက်စေခြင်းအားဖြင့်, ကြွက်သားများသည်နေ့စဉ်လူနေမှုဘ ၀ ၏လိုအပ်ချက်များအတွက်များစွာပြင်ဆင်ထားသည်. သင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောအစွမ်းထက်နှင့်တသမတ်တည်းဂေါက်သီးလွှဲရှိသည်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါဘူး. LPGA Tour ပေါ်ရှိ Pros မှသင်ယူပါ
အရွယ်ရောက်သူမိတ်ဆွေရှာဖွေသူကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – ကောင်းလားဆိုးလား?
ငါလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ရပ်အားလုံးရဲ့အရာတွေအကြောင်းပထမ ဦး ဆုံးလက်စူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပြီးနောက်ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Friend ကိုရှာဖွေသူပြန်လည်သုံးသပ်တင်ချင်တယ်. ဤတိုတောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်၏အဆုံးအားဖြင့်မျှော်လင့်ပါတယ်, သငျသညျအရွယ်ရောက်ပြီးသူ Friend Finder သည်သင်၏လိင်အဆက်မပြတ်နှင့်စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိသူများကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီရန်ထိရောက်ပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်မဖြစ်စိတ်ကူးရှိလိမ့်မည်။. ရပ်ကွက်အတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အလားတူမြင်ကွင်းကိုပင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်: သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တွေ့သည်, သငျသညျအနည်းငယ်ရက်စွဲများအပေါ်ထွက်သွားပါ, အမှုအရာတို့သည်ရင်းနှီးမှုရရန်စတင်နေပြီဖြစ်ပြီးသင်နောက်ဆုံးလူတစ် ဦး အားသင်ကွားနေသည့်အရာတစ်ခုသို့ပြောလိုက်သည်. ထိုလူသည်ထို့နောက်အားလုံး freaked ထွက်သွားသည်နှင့်နောက်တဖန်အကြားဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ် (ဒါပေါ့, ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ. ငါအဖြစ်သန့်ရှင်းစွာအဆုံးသတ်ကြပြီမဟုတ်အချို့အတွက်ခဲ့ပါတယ်). နာကျင်မှုနှင့်ဒုက္ခ, မကောင်းဘူး, သငျသညျလိုက်တယ်နှင့်တစ် ဦး တည်းခံစားရပါစေ. ကံကောင်းတာက, အရွယ်ရောက်ပြီးသူသူငယ်ချင်းရှာဖွေသူသည်ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုအဆုံးသတ်ရန်ရှိပါသည် (သို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင်, ဆင်းရဲဒုက္ခကိုစတင်ပါ). သငျသညျ BDSM သို့ရှိမရှိ, မင်္ဂလာပါ, ရာဘာစေးသို့မဟုတ်အခြားအရာအားလုံး, Adult Friend Finder တွင်တွေ့ရမည့်စိတ်သဘောထားရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိသည်မှာသေချာသည်. ပရိုဖိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံတင်ခြင်းသည်လွယ်ကူပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည် (ကိုယ့်သင်က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူရှိပါလိမ့်မယ်အဆိုပါ steamy တွေ့ဆုံလိုပဲ!), နှင့်လူတိုင်းကံကောင်းရထွက်ရှိပါတယ်. လိင်ပွင့်လင်းမှုနှင့်တိုးတက်မှုဖြစ်ခြင်းသည်မည်သည့်အခါမျှမလွယ်ကူခဲ့ပါ. အရွယ်ရောက်ပြီးသူသူငယ်ချင်းရှာဖွေသူကကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ခေတ်မတိုင်မီကလူများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာများကိုတွေးတောစေသည်! profile များသည် sexy နှင့်ရိုးရှင်းသည်, မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်များအပြီးနေသောအရာကိုခန့်မှန်းဘယ်တော့မှရှိပါတယ်. ကျွန်တော့်အတွက်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူသူငယ်ချင်းရှာဖွေသူသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အသုံးဝင်ဆုံးဆိုဒ်ဖြစ်သည်. သိသာထင်ရှားတယ်, ငါ Adult Friend Finder မှပေးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်. ငါ swingers ကလပ်သို့သွားသို့မဟုတ်တစ် ဦး S မှအခါတိုင်း&ပါတီပွဲ, AdultFriendFinder နဲ့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘယ်လောက်ကောင်းခဲ့သလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းအဆုံးသတ်လိုက်တယ်. နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်အသစ်ရှာဖွေရန်မည်သူမဆိုအားအကြံပြုလိုပါသည်. အရွယ်ရောက်သူမိတ်ဆွေရှာဖွေသူကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – ကောင်းလားဆိုးလား?
တစ် Airsoft သေနတ်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစား?
သူတို့ဟာကလေးကစားစရာတွေနဲ့မတူဘူး၊ ဒါပေမယ့် airsoft ပစ္စတိုတွေဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူကြီးလူငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံး ၀ ါသနာဖြစ်သည်။. paintball သေနတ်များနှင့်ပုံမှန် airguns များနှင့်မတူဘဲ airsoft hanguns များသည်တကယ့်အရာနှင့်တူအောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. ၎င်းသည် airsoft ပစ္စတိုအသုံးပြုသောကြောင့်နှစ်များတစ်လျှောက် airsoft သေနတ်ပိုင်ရှင်များအတွက်ပြaနာဖြစ်စေသည် “လက်နက်ကိုင်” လုယက်မှု. ဤအရာများထဲမှတစ်ခုသည်သင်၏မျက်နှာပေါ်၌ညွှန်ပြသောအခါငါ့ကိုယုံပါ၊ ၎င်းသည်တကယ့်အရာနှင့်တူသည်. ဤအန္တရာယ်ကိုတိုက်ဖျက်ရန် Airsoft ထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီများသည်ယခုအခါသူတို့၏လေသေနတ်များကိုပလတ်စတစ်များနှင့် / သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်အလင်းရောင်ဖြင့်ပြwithနာကိုဖြေရှင်းရန်ထုတ်လုပ်နေကြသည်။. သင်၏ airsoft ပစ္စတိုသည် ၆ မီလီမီတာပလပ်စတစ်ပြားကိုအမြန်နှုန်းဖြင့်ပစ်ခတ်နိုင်သည် 300 တစ်စက္ကန့်လျှင်ခြေထောက်သည်ထိတွေ့သောလက်များနှင့်ခြေထောက်များကိုအန္တရာယ်မပြုသော်လည်းအကာအကွယ်မဲ့မျက်လုံးများပျက်စီးစေနိုင်သည်. အမြဲတမ်း, အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်လေယာဉ်ပျံတစ်ချောင်းကိုပစ်သည့်အခါဘေးကင်းလုံခြုံရေးမျက်မှန်ကိုအမြဲသုံးပါ. တစ် ဦး က ricochet အတော်လေးအလွယ်တကူဖြစ်ပျက်နှင့်ရလဒ်များကိုကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်. သင်၏သေနတ်၏အမှန်တကယ်စွမ်းရည်သည်အသုံးပြုသောပစ်ခတ်မှုယန္တရားပေါ်တွင်မူတည်သည်. သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်နွေ ဦး ဖြစ်သည်, ဓာတ်ငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်. နွေနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သည်အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားကိုပေးနိုင်သည်။ သို့သော် AEG နောက်ပြန်သေနတ်များသည်အလွန်သပ်ရပ်လှသည်. မှတ်သားထားရမည့်အချက်များမှာဂျက်လေယာဉ်နှင့် AEG မော်ဒယ်များသည်အလိုအလျောက်မီးနှုန်းအပြည့်အဝပေးနိုင်သော်လည်း၊. နွေ ဦး ပစ္စတိုများသည်စျေးသက်သက်သာသာသာရှိသော်လည်းအသုံးပြုရန်မှာအနည်းငယ်ညံ့ဖျင်းသည်. အဆိုပါဓာတ်ငွေ့ blowback မော်ဒယ်များကိုမှန်ကန်အစစ်အမှန်တုပ – အထူးသဖြင့် topslide သည်ရိုက်ချက်တစ်ခုစီတိုင်းနောက်ပြန်နောက်ကျသောအခါ. airsoft သေနတ်တစ်လက်ကို ၀ ယ်ယူသောအခါသင်စိတ်ပူစရာမလိုသည့်အရာတစ်ခုမှာသင်အကြိုက်ဆုံးလက်နက်ကိုရှာခြင်းဖြစ်သည်. ရွေးချယ်မှုသည်လူကြိုက်များသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအားလုံးရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်အတူတကယ့်ကိုအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည် – ကဗျာ,Beretta နှင့်သဲကန္တာရလင်းယုန်သည်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်. Airsoft အခွံမာသီးအတွက် Robocop M93R သေနတ်ကိုပင်ရနိုင်သည် – ဤအရာသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲလာပြီဖြစ်သော်လည်း. သင်၏ airsoft သေနတ်သည်ပစ်ခတ်မှုမပြုလုပ်မီ load လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာကဲ့သို့သင်က clip ကိုသင်ပစ်မှတ်လေ့ကျင့်မှုမစတင်မီ bbs ဖြင့်ဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။. အဆိုပါ bbs သူတို့ကိုယ်သူတို့အရောင်များနှင့်စတိုင်များအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် – paintball နှင့်အလင်းရောင် -In-the- မှောင်မိုက်အပါအဝငျ; ဒါကြောင့်လူတိုင်းအရသာကိုက်ညီမယ့် ​​BB ရှိပါတယ်. အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ပိုင်းလေယာဉ်ပျံသေနတ်များသည်ပျော်စရာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဝါသနာပါသည့်အတွက်မိသားစုတစ်ခုလုံးပျော်ရွှင်စွာပျော်ရွှင်စွာပျော်မွေ့နိုင်သောဝါသနာဖြစ်သည်။. ဤသေနတ်များသည်အမြဲတမ်းကစားစရာကစားစရာများမဟုတ်ကြဘဲဂရုမစိုက်သည့်ကလေးများကအသုံးမပြုသင့်ပါ. ကျေးဇူးပြု၍ airsoft သေနတ်တစ်လက်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများကိုစစ်ဆေးပါ – သူတို့သည်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်ပိတ်ပင်ထားသည်. သင့်ဒေသကိုစစ်ဆေးပါ, airsoft ပစ္စတိုပိုင်ဆိုင်မှုသည်ဥပဒေနှင့်မဆန့်ကျင်ကြောင်းသေချာစေရန်ပြည်နယ်နှင့်အမျိုးသားဥပဒေများ. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလေယာဉ်ပျံသေနတ်များကိုစစ်မှန်သောလက်နက်များအတွက်မှားယွင်းစွာအမှုများပြုလုပ်နေသည် – တစ်ခါတစ်ရံကြေကွဲဖွယ်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူ. တစ် Airsoft သေနတ်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစား?
နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်, lake fish have been classified under three general heads: game fish, food fish, and forage or bait fish. The bass, ထရောက်ရေချိုငါး, ပိုက်, ခူး, ကျောက်တုံး, pike perch, စသည်တို့, have been generally known as game fish because of their sporting value. သို့သော်ငြားလည်း, ငါးကြင်း, suckers, some of the catfish, yellow perch, စသည်တို့, have been considered as food fish. While this latter group has not been considered as furnishing the sport that the so-called game fish do, nevertheless, it hasareal economic and recreational value. Generally speaking, in lake fishing, words are really inadequate when it comes to describing the correct procedure in casting. The best way to learn how to cast is to go down to the beach, watch an expert at work, and try to do likewise. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, lake fishing can really be fun and the novice will quickly master the correct form in lake fishing. ထို့ကြောင့်, to further harness their craft, here are some tips that could help the anglers on their lake fishing activity. 1. In lake fishing, as with other forms of fishing,asmooth, snappy stroke is required but not as snappy as when snappingawhip. This type of stroke will cause the loss of many flies. 2. Anglers should remember that it is the line that is cast, not the fly. The fly is butapassenger, which is attached to the leader. 3. Proper timing is an important factor on both the backcast and forward cast. 4. Know the fish habitat and the kinds of fish that inhabit the lakes. Some of them are the sunfish, and the small mouth black bass. These kinds of fish can usually be found hiding near some submerged log or stump, or among the plants. 5. When catching big fish in the lake, it is best to use big, sturdy rods. Big fish like the bass usually attainaweight of 12 အလေးချိန်ပေါင်, which usually inhabits the lake or pond. The reason why they grow really big is that in lakes or ponds, the food is both abundant and very rich. ထို့ကြောင့်, to handles these sizes, the ideal length and weight of the rod is 8 ‘ feet in length and from4to four and three quarters of an ounce in weight. တကယ်ပါပဲ, the fundamental principles in lake fishing are not difficult to master and with little patience and practice, the novice can becomeasuccessful angler in the lake. Tips On Lake Fishing For A Great Outdoor Experience
များစွာသောအာမခံနေသော်လည်း, အချို့သောအပျော်တမ်းဂေါက်သီးသမားများသည်ဂေါက်သီးစွမ်းအားလေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကိုကြောက်ရွံ့နေဆဲဖြစ်သည်. ဒီပြstrengthနာကဒီလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးမှာစကားမပြောနိုင်သောခေါင်းလောင်းကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိရိယာများရှိနေခြင်းဖြစ်သည်. လူတိုင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သောကြောင့်လူများစွာသည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ခွန်အားတည်ဆောက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများအကြားခြားနားချက်ကိုမပြောနိုင်ပါ. အဆိုပါနှစ်ခုအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်. ၎င်းတို့သည်အလွန်ကွဲပြားသောကြောင့်နေ့နှင့်ညအကြားခြားနားချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်. ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းသည်ဂေါက်သီးအားကစားလေ့ကျင့်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်မပါ ၀ င်ပါ. ဘာမှမလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဤမျိုးထိုကဲ့သို့သောတိုးတက်အောင်ထက်တစ် ဦး ဂေါက်သီးရဲ့ဂိမ်းကိုပျက်စီးစေလိမ့်မယ်. ဘာမှမပါ ၀ င်သည့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကိုဆုံးရှုံးစေသည်. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်ခြင်းသည်ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုအချက်သည် stretch လေ့ကျင့်ခန်းများသည်ကောင်းမွန်ပြီးစစ်မှန်သောဂေါက်သီးစွမ်းအားလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။. ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုတွင်အလေးချိန်များသည်ပိုမိုလေးလံသောအလေးများကိုမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်. ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်သည်များသောအားဖြင့်တိကျခိုင်မာစွာရှိပြီးလူတိုင်းအတွက်တော့သေချာသည်. စကားမပြောနိုင်သောခေါင်းလောင်းများကို အသုံးပြု၍ ကြွက်သားသန်စွမ်းတည်ဆောက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများသည်ဂေါက်သီးကစားသူများအတွက်အသုံးဝင်သောလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်. ဂေါက်သီးစွမ်းအားလေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များတွင်စကားမပြောနိုင်သောခေါင်းလောင်းများသည်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်. ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းအစီအစဉ်သည်ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသောအစီအစဉ်နှင့်အလွန်ကွာခြားသည်. ပိုမိုလေးသောအလေးများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလေးမခြင်းများကိုအသုံးပြုသည်ထက်အလေးချိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်သည်. သို့တိုင်အစည်းအဝေးများခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းအစည်းအဝေးများထက်အများကြီးတိုတောင်းဖြစ်ကြသည်. ဒီဂေါက်သီးအားအစွမ်းခွန်အားလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုလမ်းပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါရလဒ်တွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသခဲ့တယ်, မည်သည့်လူတစ် ဦး ရဲ့ဂိမ်းထဲမှာမျက်မြင်တိုးတက်မှုယုံကြည်ခံရဖို့မြင်ကြခံရဖို့ရှိပါတယ်. ဂေါက်သီးစွမ်းအားလေ့ကျင့်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်၏ရလဒ်များသည်များသောအားဖြင့်ကြီးမားသည်. ဂေါက်သီးစွမ်းအားလေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုမဟုတ်ပါ
Improve your golf game right now you say? I say, absolutely! Don’t waste another dime on new golf equipment: taking one more lesson; or hitting one more ball at the range, until you finish reading this article. You see’it’s not what you think that’s not allowing you to improve your golf game. It’s something very simple and easy to remedy. It’s YOU! How your body moves throughout your golf swing. Let me ask you’do you feel nice and loose, relaxed and fluid when you swingaclub on the golf course? Do you feel like your backswing is what it should be? How about your distance off the tee? Are you happy with it? Now let me ask. What have you done to improve the above situation? And has it worked up to now? If it has’congratulations! I am very happy to hear that another golfer is improving. If it isn’t working’don’t you think you should tryadifferent approach? One that makes total sense fromamechanical (technique) standpoint. If you’ve tried all the above’there’s only one thing left. As I said above’YOU! Your body is what swings the club and produces the end-result. Not the equipment, balls or all the lessons you take. You’ve got to start with the engine (your body) ပထမ, to be able to makeamechanically sound and repeatable swing for 18 holes of golf. Your body has physical limitations. All of ours does. Each person is unique, and hasadifferent set of physical issues that need to be addressed. But when they are’look out! The game gets much easier andawhole lot funner. With our country getter bigger (heavier) by the day’this isagreat reason to embark onagolf training program that will not only improve your golf game, but help you achieve your health goals also. Now isn’t that reason enough to get started right away? You will be amazed at your fast rate of golf improvement once you take this approach. You will be making swings and producing power you’ve never seen before. အဘယ်ကြောင့်? Because you are eliminating your physical limitations that have kept you from achieving the golf swing you know you are capable of. The jury is out! ကောင်းကျိုးအားလုံးသည်လုပ်နေကြသည်. You’ve got to be next! It’s time to improve your golf game once and for all! Improve Your Golf Game Right Now
Iron Palm Q&Sigung ရစ်ချတ် Clear အပိုင်းနှင့်အတူတစ် ဦး 1 မေး. သင့်ရဲ့သံထန်းလေ့ကျင့်မှု၏သမိုင်းကဘာလဲ? က. ကျွန်ုပ်၏မူလသင်တန်းပို့ချသူမှာဒေါက်တာ Fred Wu ၏အကြီးတန်းတပည့်တော်ဖြစ်သော Tyrone Jackson ဖြစ်သည်. ဒေါက်တာဝူသည် Lee Ying-Arng လက်အောက်တွင်အကြီးတန်းတပည့်ဖြစ်သည်. Lee Ying-Arng သည်လွန်ခဲ့သည့်မျိုးဆက်မှနောက်ဆုံးဟောင်ကောင်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကွန်ဖူးမာစတာဖြစ်သည်. ထိုတွင်သူသည်အတွင်းစိတ်စနစ်ကိုယ်ခံပညာအသင်းဥက္ကဌဖြစ်သည်, ဟောင်ကောင်အပ်စိုက်ကုထုံးသုတေသနစင်တာဥက္က္ဌ, နှင့်ဟောင်ကောင်တရုတ်ကိုယ်ခံပညာအသင်းဒုတိယဥက္ကဌတို့ဖြစ်သည်. သူသည် Chiropractic နှင့် Acupuncture ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီး Wu Tang Kung Fu ကိုလေ့လာခဲ့သည်, Dian-hsuhe အပါအဝင်ပြည်တွင်းအနုပညာနှင့် Dim Mak (နှောင့်နှေးသေခြင်းထိ) အများအပြားကျော်ကြားမာစတာကနေ. သူသည် Yang Chen Fu ၏အကြီးတန်းတပည့်ဖြစ်ပြီး Mind Fist ကိုလေ့လာခဲ့သည် (ရီ Chuan / ငါ -Chuan) ပါမောက္ခ Wang Shian-Jie မှ I-Chuan ကိုတည်ထောင်သူ. သူသည် Dim Mak နှင့် Dian-hsuhe တို့ကိုကျော်ပြီးလေ့လာခဲ့သည် 10 နှစ်ပေါင်း. In 1968 လီသည် 'Iron Palm' စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့သည် 100 နေ့ရက်များ’ အကြိမ်တစ်ဒါဇင်လောက်အကြာပုံနှိပ်ခဲ့တယ်. ထိုစာအုပ်တွင် Lee သည်သူမွန်မြောက်မြားစွာသောကွဲပြားခြားနားသော Iron Palm သင်တန်းနှင့်အခြားအထူးအတွင်းပိုင်းအုန်းလက်နည်းစနစ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ Lee သည် Iron Palm နည်းလမ်းများစွာကိုမည်သို့လေ့ကျင့်ရမည်ကိုရှင်းပြသည်။. သူ၏စာအုပ်တွင် Lee သည် ii Chin Ching သို့မဟုတ် Sinew Changing အပိုင်းကိုပြသည်’ ဂန္ထဝင်ဗိမာန်တော်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပြီးသူကဂန္ထဝင်တွင် '' ရှေ့သို့ '' ရှေ့နှင့်တူသောသံထန်းလေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်းကိုရှင်းပြသည့်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်ဟုရှင်းပြသည်’ သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်နည်းလမ်း. ကွန်ဖူးမှာကျွန်တော်သင်တန်းတက်ခဲ့တယ် 1979 ငါ Tyrone Jackson နဲ့အတူလေ့ကျင့်ခဲ့တယ် 1984. Tyrone လုပ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်ုပ်မှာရှိပြီးသား Kung Fu ပုံစံများကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့် Dim Mak ၏သပိတ်မှောက်နည်းစနစ်များနှင့်နေရာချထားခြင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။. ဤတွင်အချက်များနှင့်ဒီဂရီမျဉ်းများနှင့် Iron Palm သင်ယူခြင်းပါဝင်သည်. …ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ‘Iron Palm Part 2’ သံထန်းအပိုင်း 1
One of US Fencing’s brightest young stars has been nominated to be 2007 Sportswoman of the year by the Women’s Sports Foundation. Founded in 1974 by Billie Jean King, the Women’s Sports Foundation isanational charitable educational organization seeking to advance the lives of girls and women through sports and physical activity. The Foundation’s Participation, Education, Advocacy, Research and Leadership Programs are made possible by gifts from individuals, foundations and corporations. Ward earnedanomination from the Women’s Sports Foundation due to her strong results in international fencing over the past two seasons. In 2006 she won the world championship in women’s sabre, defeating teammate and reigning Olympic gold medalist Mariel Zagunis. In 2006, Rebecca Ward also won the Cadet and Junior world championships,atriple-crown performance that was the first time any fencer had held all three titles at the same time. In May 2007, Ward won the silver medal in the sabre event, at both the Hanoi Women’s World Cup and the England World Cup. Also in the month of May, she won the gold medal at the Klagenfurt Women’s World Cup. At the Las Vegas Grand Prix in June, Ward won the gold medal defeating 2000 Olympic silver medalist Xue Tan. Her win at Las Vegas made her the World Cup Champion for the 2006-2007 ရာသီ. Ward is also ranked No. 1 in the world in the saber by the International Fencing Federation (FIE) ranking list. Becca has continued winning key matches and is currently ranked #1 in the world heading into the 2007 World Championships. Upcoming tournaments will be the Americas Zonal Championships in August and then the 2007 စိန့်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ. ပီတာစဘတ်, ရုရှား – both are Olympic qualifying events. In addition to the individual accolades, Becca Ward is alsoamember of the US Women’s Sabre team, which is ranked #1 in the world heading into the 2007 World Championships. Fencer Nominated For Sportswoman Of The Year
Fox Hunting သည်ခွေးများအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောခွေးများကိုဗြိတိသျှ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ်အမြဲမြင်ခဲ့သည်, အဖြစ်မြင်းပေါ်လူ့မုဆိုး, အနီရောင်ရှိ fox ကိုလိုက်. တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများသည် 'သွေးအားကစား' ကိုရှာကြသည်’ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ဖြစ်ဖို့. သို့သော်, ပါဝင်သူများနှင့်ထောက်ခံအားပေးသူများသည်၎င်းသည်ရိုးရာမြင်းစီးခြင်းအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမြင်ကြသည်, အဖြစ်အင်္ဂလန်ရဲ့မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်သမိုင်း၏အရေးပါသောအသှငျအပွငျ. တကယ်တော့, နိုင်ငံအတော်များများတွင်ပြုလုပ်သော်ငြားလည်း, ၎င်း၏အမြစ်များကိုဗြိတိသျှသို့ခြေရာခံနိုင်သည်. venery အဖြစ်လူသိများ, သားကောင်များကိုခြေရာခံရန်ရနံ့ကို သုံး၍ အာရှုရိပြည်သို့ပြန်သွားသည်, ဗာဗုလုန်, ရှေးဟောင်းအီဂျစ်ခေတ်များ. ဒါပေမယ့်, အင်္ဂလန်မှာပေါ့, ခွေး၏ Agassaei ဖောက်သုံးပြီး, အဲဒီမြေခွေးမုဆိုးတကယ်လူကြိုက်များခဲ့သည်, ရောမမရောက်မီအရပျကိုယူပြီး. နောက်မှ, ရောမတို့သည် Castorian နှင့် Fulpine မျိုးပွားများကိုယူဆောင်လာကြသည်, အညိုရောင်ယုန်နှင့်ကျောက်မိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်သမင်အမျိုးမျိုး. တောဝက်ကိုလည်းအမဲလိုက်သောတိရစ္ဆာန်အဖြစ်လူသိများသည်. ဝီလျံကိုအောင်နိုင်သူရောက်ရှိလာသည့်အခါ Norman မုဆိုးအစဉ်အလာစတင်ခဲ့သည်, Gascon နှင့် Talbot hounds ကိုအသုံးပြုပြီး. တကယ်တော့, fi tally ဟို၏ငိုကြွေးသံ’ -Norman သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်,’ သူကတက်သည်ကိုဆိုလိုသည်. 1534 fox hunting ၏ပထမဆုံးလူသိများသည့်ကြိုးပမ်းမှုခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်, -Norfolk ရှိရာအရပျကိုယူပြီး, အင်္ဂလန်. အဲဒီမှာ, လယ်သမားများသည်၎င်းတို့၏ခွေးများကို အသုံးပြု၍ မြေခွေးများကိုပိုးမွှားနှိမ်နင်းရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်လိုက်ဖမ်းသည်. ဒါဟာသည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ 17 ထုပ်ပိုးစုစည်းသောရာစုနှစ်သည်ယုန်နှင့်မြေခွေးများကိုစတင်လိုက်ရှာသည်, ကနေစဉ်ရှိ fox အမဲလိုက်၏အားကစားများအတွက်အသုံးပြုသောသူတို့အားသည်အထိအသုံးပြုကြသည်မဟုတ် 18 th ရာစု. စက်မှုတော်လှန်ရေးကလူများသည်တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာသွားခြင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်, သူတို့အလုပ်ရှာနိုင်သည့်မြို့များနှင့်မြို့များတွင်အခြေချနေထိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်. လမ်းများသော်လည်း, သံလမ်း, နှင့်တူးမြောင်းများအမဲလိုက်မြေယာကွဲ, အမဲလိုက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အဲဒါကိုပိုပြီးလွယ်ကူအောင်လုပ်တယ်. ဒါ့အပြင်, စဉ်အတွင်းသေနတ်များ၏တိုးတက်မှု 19 ကြိမ်မြောက်ရာစုနှစ်များစွာဂိမ်းကစားခြင်းသည်လူကြိုက်များမှုအတွက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်. ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကျေးလက်အားဖြင့်ဗြိတိသျှအားကစားအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်, hound ကိုအသုံးပြုပြီးအမဲအားလုံးကျော်ရာအရပ်ကိုယူပါဘူး. ယူအက်စ်ရှိသူများသည်အမဲလိုက်ခြင်း, ကနေဒါ, အိုင်ယာလန်, နှင့်လည်းအိန္ဒိယဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်, အခြို့သောအတိုင်းအတာအထိ, ဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏အမွေ. သို့သော်, အချို့ဆိုလျှင်မြေခွေးအမဲလိုက်ခြင်းအတွက်သာအသုံးပြုခဲ့သောပထမဆုံးအစီးမှာယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်. အခြားနိုင်ငံများ, ဂရိနှင့်ရောမတို့ကလွှမ်းမိုး, ထို့အပြင် hounds ကိုအသုံးပြု။ ရှိ fox အမဲလိုက်ခြင်း၏အစဉ်အလာရှိသည်. ဥပမာ, ပြင်သစ်နှင့်အီတလီနှစ်နိုင်ငံစလုံးသည်မြေခွေးများကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်, ထိုကဲ့သို့သောဆွစ်ဇာလန်နှင့်ဂျာမနီအဖြစ်နိုင်ငံများတွင်, မြေခွေးမုဆိုးတရားမဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. အဖြစ် 2004, 170 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါတို့တွင်တွေ့ရသောမှတ်ပုံတင်ထားသောထုပ်ပိုးမှုများကို Foxhounds Association of America မှအမေရိကမှထည့်သွင်းထားသည်, အဖြစ်ကောင်းစွာများစွာသောပိုပြီးလယ်သမား, သို့မဟုတ် Non- အသိအမှတ်ပြု, အထုပ်. fox အမဲလိုက် United States မှာပြုတဲ့အခါ, အဆိုပါလိုက်။ မြေခွေးမကြာခဏဖမ်းမိမဟုတ်ပါဘူး. တကယ်တော့, သူတို့ကလေ့ကျင့်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကမြေခွေးမုဆိုးမှာဖမ်းမိမှာမဟုတ်ဘူး. နွေရာသီနှောင်းပိုင်းတွင်, ငယ်ရွယ်သော hounds 'cubbing လို့ခေါ်တဲ့အမဲလိုက်ခြင်းအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်,’ ထိုကာလအတွင်းခွေးပေါက်စများကိုလိုက်ရှာရန်သင်ကြားပေးပြီးငယ်ရွယ်သောမြေခွေးများကိုလိုက်ရန်သင်ကြားပေးသည်. သင့်လျော်သောရာသီကိုနိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်စတင်လေ့ရှိသည်. Fox မုဆိုး၏သမိုင်း
သင်တစ် ဦး အစသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ကြက်ဆင်မုဆိုးရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကပုံရသည်ထက်ပိုမိုခက်ခဲကြောင်းထွက်ရှာတွေ့ကြလိမ့်မယ်. တော၌ကြက်ဆင်ထွက်, ပင်နာမကိုအမှီနှင့်အတူ, တစ် ဦး တစ်ယောက်သည်အမဲလိုက်ရန်နှင့်အမဲလိုက်ခြင်းအတွက်ခက်ခဲသောငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်. ကြက်ဆင်မမျှော်လင့်သောထောက်လှမ်းရေးအဆင့်နှင့်စိတ်အားထက်သန်သောရူပါရုံကိုရှိပြီးသူကရှင်သန်မှုစွမ်းရည်ကိုလျှော့မတွက်သင့်ပါတယ်. မုဆိုးတစ်ကောင်သည်ကြက်ဆင်ပေါ်တွင်ပိတ်ပြီးခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများကိုတိုးတက်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်. သို့သော်, သာလွန်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သောမျိုးနှင့်အတူ, သငျသညျကိုအလွန်ကြက်ဆင်အမဲ၌သင်၏အလေးသာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အစွန်းရှိနိုင်ပါသည်. ဤသည်မုဆိုးတူရကီ၏မြင်သာမှုလျှော့ချခြင်းဖြင့်တစ် ဦး ကိုပစ်ခတ်ယူဖို့လုံလောက်တဲ့အတွက်ပိတ်ဖို့ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်. လယ်ပြင်ပေါ်တွင်လူတစ် ဦး သည်, ထွက်ရှိတဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့အထိရောက်ဆုံးပုံစံကတော့ ghillie ဝတ်စုံပဲ, အရာတရာ့ငါးဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစကော့တလန်၏သစ်တောများအတွက်တီထွင်ခဲ့သည်. သင်၏ပုံစံကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲရန်နှင့်တောရိုင်းတွင်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်သင်၏ပုံမှန်အဝတ်အစားများပေါ်တွင်သင်ဝတ်ဆင်နိုင်သည့်ဝတ်စုံတစ်ခုဖြစ်သည်. ဂျူးသို့မဟုတ် burlap တူသောထည်အပိုင်းအစများအားလုံးဝတ်စုံကိုကျော်ဆွဲထား, တိရိစ္ဆာန်များသည်သင့်ကိုမြင်ရန်အလွန်ခက်ခဲစေသည်. ၎င်းသည်လူသားဝတ်ဆင်သူသည်ပုံစံနှင့်လူ့ဘောင်ကိုဖြိုခွဲခြင်းဖြင့်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်သို့ပေါင်းစည်းစေသည်. မုဆိုးတကယ်တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ခြင်းလျှင်, အဆိုပါ ghillie camo အလွန်ထိရောက်သောနိုင်ပါတယ်, မမျှော်လင့်ဘဲဂိမ်းညာဘက်သူတို့ကိုမှတက်တွေးမိဘို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. အဆိုပါ ghillie ဝတ်စုံကိုလူ့ပုံစံများကိုချိုးဖောက်နှင့်မျက်မှောက်၏ကြက်ဆင်ရဲ့စူးရှသောအသိအံ့ be ခြင်းဖြင့်ကြက်ဆင်မုဆိုးကူညီ. ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသောကြက်ဆင်ကိုတောအုပ်များပေါ်သို့မပျံ့နှံ့စေရန်တားဆီးရန်အတွက်မုဆိုးတစ် ဦး သည်အောင်မြင်မှုရရန်အမြန်ဆုံးသေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ရမည်. တူရကီတွေကိုလှည့်စားနေသူတစ် ဦး သည်စိတ်ရှည်စွာလမ်းလျှောက်ပြီးမြေကြီးကိုအနိမ့်အမြင့်ဖြင့်ထိန်းထားခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်တူရကီတွေကြားမှာဒီအကွာအဝေးကိုဖြတ်နိုင်သည်. ညအချိန်တွင်ကြက်ဆင်များကိုညအိပ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်ရှာဖွေရန်အလွန်သင့်တော်သည်. ကြက်ဆင်ပေါ်မှာခိုးကြောင်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်. တကယ်တော့, သငျသညျလယ်ပြင်ပေါ်တွင်ကြက်ဆင်ထွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိလျှင်သင်ပြီးသားမြင်ကြရဲ့ကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်. အလွန်ကြီးစွာသောအကွာအဝေးကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအပြင်, သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့ရူပါရုံကိုတစ်ကျယ်ပြန့်ရှိသည်, သူတို့ကိုခက်ခဲနောက်ကွယ်မှသူတို့ကိုနောက်ယောင်. သားကောင်များကိုသူတို့အပေါ်သို့ခိုးဝှက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်, တူရကီအုပ်စုတစ်စုမကြာခဏလယ်ပြင်၌ရှိသမျှသောနှစ်ဖက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်စက်ဝိုင်းထဲမှာတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်. တစ်ခုတည်းသောနေရာတွင်ရှိနေခြင်းနှင့်လူ ဦး ရေထူထပ်သောကြက်ဆင်areaရိယာတွင်စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်အချိန်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သောကြောင့်အတော်အတန်နှေးကွေးသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။. ထို့အပြင်သတိရှိသော gobblers အုပ်စုတစ်စုသည်သင်ရွေ့လျားသည်နှင့်သင်ကောင်းသောရိုက်ချက်ရရန်အခွင့်အရေးမတိုင်မီသင်ဆုတ်ခွာသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင့်ကိုတွေ့မြင်နိုင်မည့်အခွင့်အရေးအမြဲရှိသည်။. ဒါဟာလုံ့လဝီရိယနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုယူပေလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်တူရကီ၏အုပ်စုတစ်စု၏အကွာအဝေးအတွင်းရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. အစွမ်းထက်သေနတ်နှင့်အတူ, တစ် ဦး ghillie ဝတ်စုံကို, နှင့်ကောင်းမွန်သောကြက်ဆင်ခေါ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ထိုတူရကီများကိုသာလွန်ကောင်းမွန်သောတူရကီအမူအရာဖြင့်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်
The gulf coast of Florida offers some of the best grouper fishing around. The Gulf has fairly calm water most of the year (except for our new 11 month recent hurricane season). The gear is pretty simple:afairly stout rod, I say fairly stout because you don’t want your rod too stiff because this will effect the action it has on the bait…ဒီနောက်ပိုင်းမှာပိုမို. I use 40lb line on the reel witha100lb shock leader, and about an 8/0 ချိတ်. I like to use live bait for grouper fishing but some prefer jigs, ဇွန်း, and even heavy grade trolling lures.
After gear, ည့်သည်များ, and boat are ready we need to catch some bait. I like to use the “junk” fish that you catch when bottom fishing with smaller rigs. Blue runners, sand perch, lizard fish, စသည်တို့… Grouper are not real picky eaters when it comes to live bait. ဟုတ်တယ်, they do have favorites like anything else that eats, but the fish mentioned above will work great. I start my day withapiece ofalarge squid, about the size of you open hand is usually enough. I like to use large squid because it is tougher and stays on the hook better. Check you local fish market for availability.
ဘိလိယက်၏မူလအစကိုမည်သူမျှမသိ. အများအားဖြင့်ယုံကြည်မှုမှာဂိမ်းသည်ပြင်သစ်၌ ၁၄ ရာစုအစောပိုင်းကကစားခဲ့သည့်ခရစ်ကက်နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသည့်အပြင်ဘက်တွင်ကစားသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အလွန်လူကြိုက်များလာပြီးရာသီဥတုအေးသည့်အချိန်တွင်အပြင်ပန်းအားကစားရန်ခွင့်မပြုသည့်အချိန်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်, ၎င်းသည်အိမ်တွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးအစိမ်းရောင်ခံစားမှုနှင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည့်စားပွဲတစ်ခုပေါ်တွင်ကစားခဲ့သည်. မာရိသိတဲ့အခါမင်းသိလား, စကော့ဘုရင်မ, သေပြီ, သူမသည်တစ် ဦး ဘိလိယက်အထည်နှင့်ပတ်ရစ်ခဲ့သည်? ရေကူးကန်သည်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဂိမ်းအတွက်ပထမဆုံးအားကစားဖြစ်သည်ကိုသင်လည်းသိပါသလော 1873? စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်ဘိလိယက်ကစားပွဲကိုနှစ်သက်သောသမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသည်. ၎င်းတို့တွင် King Louise X1V နှင့်ဇနီး Marie Antoinette တို့ပါဝင်သည်, Mozart, ရှင်ဇိုအာဘေးလင်ကွန်း, နပိုလီယံနှင့်ဂျော့ဝါရှင်တန်အခြားသူများအကြား. အဲဒီအချိန်တုန်းက, ဘိလိယက်ဘောလုံးသည်ဆင်စွယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ဆင်ဆင်များ၏အလယ်ဗဟိုမှထုတ်သည်. ဆင်ဆင်ဆင်ကသင့်ကို ၃ ယောက်သာပေးနိုင်တယ်4ဘိလိယက်ဘောလုံး. အဆိုပါရေကန်ဂိမ်းအကြောင်းကိုမှာမှာ၎င်း၏ကစားသမားအကြားအမြင့်ဆုံးပျမ်းမျှအသက်ရှိသည်ဟုဆိုသည် 35 yards နှင့်လည်းကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သော Billiard သည်ပြင်သစ်စကားလုံး billart မှ mace ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။. အဆိုပါ mace croquet လို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူစတင်အသုံးပြုတဲ့လက်ကိုင်နှင့်အတူတုတ်ဖြစ်ခဲ့သည်. ဒါဟာ၎င်း၏အစောဆုံးသမိုင်း၌တရားမဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်, ရေကန်ဂိမ်းအချို့အတွက်တရားမဝင်ခဲ့သည်. ပြင်သစ်ရှိချာ့ချ်သည်ရေကန်ကိုအကျင့်ယိုယွင်းသည်ဟုယူမှတ်သည်မှာရယ်စရာဖြစ်သည်. အမေရိကရှိကိုးရာစု၌, စကားလုံးရေကူးကန်အခန်းကိုမြင်းပြိုင်ပွဲလောင်းကစားခြင်းအတွက်ဆိုလိုသည်။ အမေရိကရှိပြည်နယ်အတော်များများတွင်ပိတ်ပင်တားမြစ်သည်. သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်တွင်ဗာဂျီးနီးယားရှိသူ၏နေအိမ်တွင်သူဝှက်ထားသောရေကန်စားပွဲတစ်ခုရှိခဲ့သည်. ဒီနေ့, စည်းကမ်းချက်များရေကူးကန်အခန်းနှင့်ဘိလိယက်အခန်းအတူတူပါပဲဆိုလို. အဆိုပါရေကန်ဂိမ်း၏မူလအစ
Go karts are fast, exciting and easy to handle, and there are tracks all over the country catering to every age range from kids to teens to adults. Gokarts are generally easy to drive, easy to control and are how you can experience the excitement of Formula One racing without as much of the danger. Go-karts are just beginning to come into their own and are geared toward beginners in either off road or paved track go kart racing. They are built to withstand years of use and abuse and are terrific when it comes to performance, styling and low maintenance. There are many types of vehicles that are built for fun. These include ATVs, dirt bikes, scooters, mopeds, mini bikes and go karts. If you are looking to find some excitement with4wheels then you have to discard the dirt bike, scooter, moped and mini bike. And the all terrain vehicles are typically made for traveling off road. That leaves the go kart. If you want to go racing like the big boys, withamighty gasoline powered engine and relative safety, go karts are what you will want to be racing. Whether you just want some cheap racing fun or would like to someday becomeaprofessional race car driver, the go-kart isagreat way to begin. Many NASCAR drivers today got their start by racing go karts when they were as young as five years old. Carts have been around foralot of years, but have increased in popularity only recently. Back in the olden days, carts were only available at the neighborhood Family Fun Center or Amusement Park. And these gokarts only had two speeds, slow and slower. But were they safe? Let’s just say it wasn’t easy to get hurt traveling at just5တစ်နာရီမိုင်. But even at the slower speeds they were still loads of fun. Imagine the thrill you can experience now with the faster speeds and the bigger and better track selections. Great go-cart tracks have been sprouting up all over. But have the increased karting speeds made the go carts unsafe? They used to be so terribly slow that no helmets were even required. But with the speeds attained today helmets are required at tracks everywhere, even the kiddie’s tracks. But don’t let that scare you, they are still extremely safe and there is never any need to go faster than your own comfort dictates. You can control, အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, the amount of danger you experience inago kart. Your decisions, from the go kart you buy, to the safety equipment you use, to your level of caution expressed on the track, determine how safe you will be. The faster you go the more chance of sustainingasubstantial injury. So taking every safety precaution is alwaysasmart idea. Carting is generally very safe if you followafew simple rules. The number one rule is ‘always wearahelmet.’ In the event ofacrash it can spare you fromaserious head injury. ဒါ့အပြင်, never forget to fasten your safety harness. This will prevent you from being tossed out duringaroll. Never race at speeds that you don’t feel comfortable with. If speed is not your thing you should remain in the lesser levels of racing groups. If you decide to race, even inakid’s competition, you should be wearingafire safety suit, racing shoes and protective gloves. The shoes and gloves should also be fire retardant. There is not much gas inagocart, but if it should happen to catch on fire the fire-safe equipment you use could save youalot of pain and discomfort. Gocarts today all have roll bars that rise above the driver’s head. In the event that you lose control, causing your go kart to flip over, the roll bars and safety harness can keep you from harm’s way. You may think that it could not happen to you because you are suchagreat driver, but the other racers on the track may not be so great. This is the reason whyagokart has side bars that will protect you in the event that another racer loses control and rams your kart. With all of these precautions how can anyone get injured? It’s possible, but the chances of experiencingaserious injury are severely limited by simply followingafew safety rules. Go karts are just about as safe as you want to make them. Go Karts Are Fun, But Are They Safe?